Shirweyne Beesha Bariga Burco uga Furmay Gar’adag iyo Shirkii Golaha Dhexe ee KULMIYE oo dib loo riixey | Somaliland.Org
Shirweyne Beesha Bariga Burco uga Furmay Gar’adag iyo Shirkii Golaha Dhexe ee KULMIYE oo dib loo riixey
July 26, 2008	Gar’adag (Somaliland.org) – Beelaha Bariga Burco (H/Jeclo) oo ka mid ah beelaha waaweyn ee Somaliland ayaa maanta shirweyne uga furmay Magaalada Gar’adag ee Gobolka Sanaag, halkaas oo maalmihii la soo dhaafay ay ku sii qulqulayeen ergooyinka ka qaybgelaya shirka, salaaddiinta beesha, xildhibaanno iyo masuuliyiin kale.
Shirkan oo ay ka qaybgelayaan in ka badan 200 oo ergey, waxa saaka rasmi ahaan u furay Suldaanka Guud ee beelaha Bariga Burco, Suldaan Cabdillaahi Suldaan Cali Muuse, waxana uu ku furmay jawi aad u wanaagsan.
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaadhaya madasha shirka, hadal furitaan ah oo uu Suldaanka Guud halkaa ka jeediyey kadib, waxa iyana madasha shirka ka hadlay Salaaddiinta kale ee Beesha, waxaana ka mid ahaa Madax-dhaqameedyada madasha maanta ka hadlay Boqor Cismaan Aw Maxamuud (Buurmadow) oo isaga lagu eedeynayey in uu ku hawlan yahay olole uu kaga soo horjeedo shirka.
Boqor Cismaan Aw Maxamuud (Buurmadow) oo beryahan dambe ku sugnaa magaalada Hargeysa, waxa uu gaadhey Gar’adag shalay, isaga oo Hargeysa ka sii horkacay Xildhibaan Ruush Carraale iyo dhallinyaro door ah oo ka mid ah beeshiisa. Hase yeeshee, waxa la sheegay in Buurmadow hadal uu ka jeediyey shirka uu caddeeyey in aanu ka soo horjeedin shirka, isla markaana uu u hoggaansan yahay talada beesha.
Shirka maanta ayaa la sheegay in Salaaddiinta oo keli ahi ka hadashay, dhammaantoodna ay iska daba mareen ujeeddada shirka iyo sida loogu baahan yahay in danaha beesha loo midoobo, meelna looga soo wadajeesto. Waxaana la filayaa berrito in shirku doorto Shirguddoonka.
Shirkan oo qabanqaabadiisu ay magaalada Burco ka socotey muddo sannad ka badan, waxa ka qaybgalay dhammaan Xildhibaanada Golaha Wakiillada ee ka soo jeeda beeshaas, marka laga reebo laba xildhibaan oo dalka dibaddiisa ku maqan iyo Xildhibaan Ibraahim Axmed Raygal oo isagu ku sugan Hargeysa, isla markaana la sheegay inuu raacsan yahay Wasiirka Gaashaandhigga, Cabdillaahi Cali Ibraahim oo ay isku raas yihiin, kaas oo dhowaan soo abaabuley odayaal raaskiisa ah oo Tv-ga Madaxtooyada laga maamulo ka sheegay inay ka soo horjeedaan shirka. Hase yeeshee, shirka oo si adag loo maamulayo, qabanqaabadiisuna muddo qaadatay ayaa la sheegay in dhammaan ergooyinkii loogu talagalay ee beelaha iyo ardaayadu ay ku dhan yihiin.
Ilaa iyo hadda lama ogaan ajandaha shirka iyo arrimaha lagaga hadlayo, iyada oo guud ahaanba dadweynaha Somaliland ay isha ku hayaan, una dhegtaagayaan shirkaas iyo wax ka soo baxa.
Dhinaca kale, Shirkii Golaha Dhexe ee xisbiga KULMIYE oo loo cayimay inuu 29ka July ka furmo magaalada Burco ayaa dib loo riixey ilaa wakhti aan la cayimin.
Guddoomiyekuxigeenka 3aad ee xisbiga, mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici ayaa dhowaan daboolka ka qaaday in dib loo dhigay shirka. Waxana uu tilmaamay in la qaban doono horaanta August.
Dib u dhaca shirka Golaha Dhexe ee KULMIYE ayaa la filayaa inuu sababay shirka Garadag oo ay ku maqan yihiin xubno badan oo ka tirsan Golaha Dhexe.